विमल घर्तीकी बहिनीको हत्या भएको आशंका – Saurahaonline.com
विमल घर्तीकी बहिनीको हत्या भएको आशंका
सौराहा अनलाइन | २०७३, १३ जेष्ठ बिहीबार
नवलपरासी, १३ जेठ । फुटबल स्ट्राईकर विमल घर्ती मगरकी बहिनीको मनीषा घर्तीको हत्या भएको हुनसक्ने प्रहरीले आशंका गरेको छ । घर्ती बिहीबार बिहान आफ्नै घरको कोठामा मृत फेला परेकी थिईन् ।
घटनाको प्रकृती हेर्दा करणी पछि हत्या भएको हुनसक्ने प्रहरीले जनाएको छ । स्थानीयले बताएअनुसार घर्तीका प्रेमी (नाम नखुलाइएको)लाई प्रहरीले सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अर्जुन रानाभाटले जानकारी दिए । घटना अनुसन्धानकै क्रममा रहेका कारण नियन्त्रणमा रहेका युवकको नाम प्रहरीले खुलाउन चाहेन ।
फुटबर दाइ विमल घर्तीसँग मृतक मनिषा !
आमा धनमाया घर्ती काम विशेषले बुधबार बुटवल गएकी थिईन् । १७ बर्षीय मनीषा घरमा एक्लै थिईन् । बिहान बुटवलबाट घर फर्केकी आमाले घरको ढोका बाहिरबाट चुकुल लगाएको देखीन् । खोलेर हेर्दा मनीषा बिस्तारामा शंकास्पद तरिकाले पल्टिएको देखेको धनमायाको भनाइ छ । छोरीको त्यस्तो अवस्थापछि आमा धनमायाले स्थानीयलाई बोलाएपछि मात्रै प्रहरीलाई खबर भएको थियो ।
कस्तो अवस्थामा भेटीयो मनिषाको शव ?
बिस्तारामा शरिरको माथीपट्टीको कपडा लगाएको तर तल्लो तल लगाउने कपडाको भित्री बस्त्र खोलिलेर फालिएको अवस्थामा मनिषा फेला परेकी थिइन् । भित्री बस्त्र अर्को कोठामा फालिएको भेटिएकाले पनि हत्या भएको हुनसक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको हो । घटनामा शंका गर्न मिल्ने अर्को आधार मनीषाको घाँटीमा काँलो दाग देखीएको नवलपरासीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रानाभाटले बताए ।
घटनाको अनुसन्धानको जिम्मा जिल्ला प्रहरीलाई
घटनास्थालमा सुरुमा ईलाका प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक श्याम कृष्ण केसीको नेतृत्वमा टोली खटिएको थियो । घटनास्थलमा पुग्दा मृतको शवको अवस्थाका आधारमा मनीषाको हत्या भएको जस्तो लागेपछि प्रहरीले जिल्लालाई खबर गरी प्रहरी नायब उपरीक्षक रानाभाट नेतृत्वको टोली अनुसन्धानमा खटिएको छ ।